बिज्ञान प्रबिधि – Online Palanchok
झुक्किएर पनि मोबाइलमा यी ४ कुरा सेभ नगर्नु, गरे सजिलै हुन्छ लिक !
एजेन्सी । हामी पछिल्लो समय पुरै प्रविधियुक्त साधनमा निर्भर भएका छौ । दिमागलाई कति दुख दिन चाहान्नौँ । यसैले हरेक कुरा मोबाईल वा अरु डिभिाईसमा सेभ गर्ने चाहिएको बेला हेर्ने बानी छ । तर सम्भिने झण्झटबाट मुक्त हुन वा पछि खोजेको बेला सजिलै प्राप्त गर्न गरेको यो कार्यले धेरैलाई पछुतो महसुस गराई सकेको छ । यसैले हामी सचेत गराउँदैछौ । मोबाइल फोनमा आफ्ना संवेदनशील सूचना, तस्वीर, लगायतका चिजहरु सेभ गर्ने गर्नुभएको छ भने सावधान । तपाइँले आफ्नो मोबाइलमा कहिल्यैपनि यी चिजहरु सेभ नगर्नुहोस्ः पर्सनल नम्बरः कहिलेकाहीँ मानिसहरु आफ्नो नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नं. , प्यान नम्बर, बैंक अकाउन्ट नम्बर आदि समेत आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्दछन् । आकस्मिक रुपमा आवश्यक परेमा तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने सजिलोका लागि मानिसहरुले यसो गरेका हुन्छन् । तर यस्ता नम्बरहरु गोप्य तथा संवेदनशील हुन्छन् । त्यसैले भुलेर
साइबर अपराधमा १ करोड जरिवाना, १५ वर्ष जेल
काठमाडौं । साइबरसम्बन्धी अपराध गर्नेलाई अब १ करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । सरकारले नयाँ कानुनमार्फत् यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’ को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानी पुर्याए ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना हुने साथै ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिनेछ । संसदमा छलफल र आवश्यक परिमार्जनपछि यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ । समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
तपाईले खल्तिमा बोक्ने मोवाइलको ब्याट्री जतिबेला पनि पड्किन सक्छ र ज्यानै जान सक्छ, यसरी अपनाउनुहोस् सजकता
काठमाडौँ । पछिल्लो समय सामसुङको स्मार्टफोनको ब्याट्रि पड्केको खबरहरु आइरहेका छन् । विराटनगरमा शुक्रबार मात्रै मोबाइलको ब्याट्री पड्केर एक बालकको मृत्यु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका–१५ मा ११ वर्षीय बालक अमित मण्डलको परालको आगोमा ब्याट्री पड्केर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले ओएसनेपाललाई जानकारी दिए । आगो बालेर ताप्ने क्रममा बिस्फोट हुँदा घाइते भएका बालकको उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो । मोबाइलको ब्याट्री पड्किएर ज्यान गुमाएका मण्डल परिवारलाई प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । सामसुङ नोट–२ मा यस्तो समस्या देखिएको थियो । यस्ता घटनाका कारण यसको विक्रीमा पनि रोग लगाइएको थियो । यस्तो घटना कम्पनीको गुणस्तरमा मात्रै भर पर्दैन, प्रयोगकर्ताको तर्फबाट पनि केही गल्ति हुनसक्छ । तपाई पनि यस्तो गल्ति नगर्नुहोस् भन्नका लागि केह
युट्युब खोलेर यसरि कमाउनुहोस मासिक ४० हजार देखि ३५ लाख सम्म (तरिका सहित)
काठमान्डौ , धेरै अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई ‘धेरै नेट नचला है’ भनेर गाली गर्छन्। यसको आशय इन्टरनेट चलाएर आफ्नो उत्पादनशील समय खेर गएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। इन्टरनेट चलाएर सबै युवा आफ्नो सिर्जनशीलता घटाइरहेका छन् त ? आश्चर्य लाग्न सक्छ, युवा पुस्ता कला देखाएर इन्टरनेटबाटै मनग्गे कमाउन पनि थालेका छन्।कुनै समय संगीत कति हिट भयो भनेर क्यासेट बिक्रीलाई आधार बनाइन्थ्यो। गायक र सर्जकले निश्चित रोयल्टी पाउँथे। कम्पनीले नाफा कमाउँथे। अहिले जमाना फेरिएको छ। श्रव्य क्यासेट, सीडी, सीआरबीटी हुँदै संगीत व्यवसाय युट्युबमा केन्द्रित छ। मोरङका कृष्ण उदासको आफ्नै युट्युब च्यानल छ। उनले आफ्ना सिर्जना युट्युबबाटै सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। ‘प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सामान्य मान्छेले पनि कला प्रस्फुटन गरेर आम्दानी गर्न सक्दो रहेछ’, उनले भने। उनी युट्युबबाटै मासिक चार सय अ मेरिकी डलर कमाइरहेका छन्।उनका दुई युट्यु